Blues Jeans. Kubvunzana nemunyori we The Camp | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Hurukuro, Vanyori, Vechidiki Mabhuku
Mufananidzo: Blue Jeans. Facebook peji.
Bhuruu Jeans, iro zita rekunyepedzera remunyori weSevillian Francisco de Paula Fernandez, ine novhero nyowani mune yayo yakawanda, yakabudirira uye yatove refu trajectory kunyanya mumabhuku evechidiki. Yayo yakanzi Musasa uye iri thriller mairi anotsunga nekubata chakavanzika chakakomberedza rufu mumamiriro ezvinhu asinganzwisisike akaitika mumusasa wakapindwa nevechidiki kubva kwakasiyana kwakasiyana. Muizvi indavhiyu inotiudza nezvazvo uye nezvimwe zvakawanda. Ndinonyatsokoshesa nguva yako uye mutsa.
Bhuruu Jeans - Bvunzurudzo
BHUKU NEWS: Musasa ingano yako nyowani, kwawakatama uchibva kumatimu ebhuku rako rekare. Chii chaunotiudza nezvazvo uye iyo pfungwa yakabva kupi?
BJ: Handifunge kuti ndasvika kure zvakadaro. Izvo zvinoitika ndezvekuti ikozvino chikamu chikuru chakatsaurirwa chakavanzika, asi ichine imwecheteyo Blue Jeans chitambi senguva dzose. Icho chiitiko chechidiki chinomuka kubva mukukurukurirana pakati peumwe wangu neni takasungwa zvizere. Zvakaitika kwaari kuti aigona kusarudzira vamwe vakomana mumusasa vasina nharembozha uye vasina Indaneti uye kubva ipapo ndakagadzira nyaya.
BJ: Ini chokwadi handirangariri. Semwana mudiki ndakaverenga zvakanyanya nekuti vabereki vangu vese vanoverenga zvakanyanya uye ini ndagara ndichigara ndakakomberedzwa nemabhuku. Pamwe nyaya yangu yekutanga yakanyorwa yaive pfupi nyaya umo munhu anofa mukutamba kwemitambo, uye pakupedzisira inoonekwa kuti mhondi inini (kana chimwe chakadai). Kunyangwe chinhu chekutanga chandinorangarira iri chinyorwa nezve kuseka kwavakanditumira mukirasi.
B.J.: Agatha Christie ndiyo chete mareferenzi angu. Ndakaverenga zvachose zvese nezvake. Handina vazhinji vanyori vemusoro: Carlos Ruiz Zafon, Tolkien, Jules Verne… Ndakaverengawo zvese nezve Dolores Round o John verdon, semuenzaniso.
BJ: Zvimwe ku Poirot kana kuna Sherlock Holmes. Ini ndinoda mavara akangwara uye anodonhedza.
BJ: Ndainyora mumashopu ekofi kudzamara denda rarova. Ini handigoni kumira ndakanyarara kuti ndinyore uye, zvakapesana, kunyangwe kana ruzha rudiki rwekuverenga. Kunyangwe ini ndisina makuru ekuvaraidza echinhu chimwe kana chimwe icho.
BJ: All angu enganonyorwa, kunze Musasa, Ndazvinyora kure nemusha. ndinofarira nyora neruzha, kutarisa vanhu vachiuya vachienda. Ini handikwanise kutsanangura kuti sei, nekuti ini handizvizive ini. Zvitoro zvekofi zvakava mahofisi angu. Kuti uzo leer Ini ndoda kuve mumba makanyarara pasofa kana pamubhedha.
B.J.: Inoenda nenguva. Iyo inoverengeka nhema, the thrillers, the Chakavanzika… Ndozvandinowanzoverenga. Asi ini zvakare ndakaverenga zvakawanda nhoroondo yenhau panguva iyoyo uye ini ndinoedza kuramba ndichiziva nezvakanaka zvevechidiki zvinyorwa, kuti ndiziviswe nezve izvo vechidiki vanoverenga uye zvinoitwa nevandinodzidza navo.
BJ: Ndiri mune muverengi mira pari zvino. Ndine akati wandei akamirira enganonyorwa senge Pakati pehusikunaMikel Santiago, Gonhi, naManel Loureiro kana Mutambo wemweya naJavier Castillo. Ini handisi kunyora futi, kunyangwe ini ndisingafunge kuti zvinotora nguva yakareba kugara pamberi pekomputa uye kutsvaga nyaya nyowani.
BJ: Vaparidzi vari kupora kubva padambudziko rekona uye ndinofunga havana kutambura zvakanyanya sekutarisira, kunyangwe zviri pachena kuti zvikamu zvese zvakaomerwa. Inyika yakaoma uye ine ephemeral, saka kuti upe nguva yakawanda kune izvi unofanirwa kuzvipa ese mazuva makumi matatu nematanhatu pagore. Zvirinani ndizvo zvandinoita. Ndisati ndazviita, ndakaedza kutumira uye Handina kuzviwana kekutangaMuchokwadi, vese vaparidzi vakandiramba. Asi Handina kukanda mapfumo pasi, Ndakaona kuti masocial network neInternet zvinogona kuva chishandiso chakakura uye chiratidzo chakanaka chekusvitsa vaverengi uye nekutenda kunharaunda yandavaka padandemutande randakakwanisa kutsikisa Nziyo dza Paula. Pave nemakore gumi nemaviri kubva izvi, gumi nemana enganonyorwa mumusika, zvakadaro Ndichine zvakawanda zvekudzidza.
BJ: Zvakaoma kwazvo. Ini handifunge kuti denda, hutachiona uye nezviri kuitika zvine chero chinhu chakanaka. Zviripachena kuti, munguva pfupi inotevera, zvese izvi zvichaonekwa mune akateedzana, mabhuku nemamuvhi. Ngativimbei kuti hatipedze kugutsa vanhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Bhuruu Jeans. Kubvunzana nemunyori weThe Camp